Umalusi waseScotland useluhlu lwezinja ezibalaseleyo, ezintle, ezihle kakhulu. Ukubonakala kweenja kwachaphazeleka yimozulu engathandekiyo, ekhohlakeleyo yaseScotland, eyakha iingubo ezide, ezinqabileyo, ezinokuthi zikhusele ngokufanelekileyo inja kwimiphumo yeqondo eliphantsi. Kukho uluvo lokuba uhlobo oludala lwezinja zezimvu zalo mhlanga lwadlula kunye ne-setters kunye ne-greyhounds, ngenxa yokuba izinja zatshintsha ukubonakala kwazo kwaye zanda ngokukhawuleza.
Ngamanye amaxesha i-sheepdog yaseScotland ibizwa ngokuba ngu-Sheltie, bhekisa lo mfuzo ukuba uluse inja. Kwixesha la mandulo, abalimi baseScotland baphumelela ngokubaluleka kulo mbandela wezinja ekudleni izimvu.
Uhlobo lwezinja zaseScotland lwangeniswa ngaphandle ukusuka e-Iceland kwaye nangona iimozulu ephosakeleyo yaseScotland, iyenzile ngokupheleleyo. Olu luhlobo lwezinja lujamelene kakuhle nomsebenzi walo wokugusha izimvu, izinja zenza lula umsebenzi wabelusi ngokugubha ngokugqithiseleyo igusha elalibuyile emhlambini. Ngokuqhelekileyo i-sheepgog yaseScotland ibizwa ngokuthi "collie", kanti lo mva uhlanga oluzimeleyo lwezinja, nangona zihlandlo zombini iintlobo zibonakalisa njengezona zilwanyana ezilungileyo kakhulu. Ama-Collies ngobungakanani bawo ahluke kwi-sheltie, inkulu kakhulu, kwaye izinja zaseScotland zize zithandana ngothando ngokuthi "iponyoni yaseScotland."
Njengomhlanga ohlukeneyo, inja yaseScottish Shepherd yabonwa ngowe-1860 kwi-Dog Show, eyayibanjwe minyaka yonke eScotland. Kuze kube ngoku, abafuyi beenja kunye ne-cynologists baye baphumelela ukuzalisa abalusi baseScottish ngeempawu zabo eziphathekayo zengqondo kunye nembonakalo efanelekileyo.
Uhlobo lunentloko encinci, ende ende, xa kuthelekiswa nempahla yezimvu zezinye iintlobo kakhulu. Ukulunywa kweenja zalolu hlobo luhlobo lwe-scissor, olunamandla, olunamandla, kodwa oluncinci amazinyo. Izindebe ziqinile, zimnyama ngombala. Umlomo ophantsi uhlanganiswe ngumlomo ophezulu. Umlomo ophantsi u kufuphi eduze nomhlathi.
Uhlobo luye lwalungisa amehlo. Amehlo anesimo se-almond. Ininzi yamehlo ingumbala omnyama obomvu, ngamanye amaxesha umbala obomvu. Ubungakanani beli gama ngokuqhelekileyo lilingana nobukhulu bekhanga.
Iindlebe zohlobo zincinci ngobukhulu, zifana noonxantathu ngokuma. Iindlebe kufuneka zibe kwindawo yokuma, iingcebiso zeendlebe kufuneka zinciphise ngokukhawuleza, kodwa akufanele zilungele ukuhlaziywa.
Uhlobo lulo lukhuni, lukhuni intamo, luhamba ngokukhawuleza luya kubuna. Isifuba siphuhlisiwe, esicacileyo, ngokubanzi ngokubanzi. Umgca webele uya kufakwa kumgangatho weengqungquthela ezivela ngaphantsi. Uhlobo luba nesisu esiswini. Ubunzima kakuhle, ephakamileyo. Ingqolowa iqinile, iqonde nge-sinewy and short short, ehamba ngokukhawuleza ibe yindawo encinci, ebanzi ngokubanzi.
Iimbambiso, xa zijongwa phambili, zifana. Iimpawu ze-humeroscopic zenze i-angle ° 120 °. Iigqabha ze-oval zivalile iminwe, izibophezelo ezichanekileyo, zikhomba iingqungquthela, zincinci, kwaye azikho ixesha elide. Imilenze yemilenze, xa ibonwa ngasemva, iyafana kunye kwaye ikhangele ngqo. Amathanga aseShetland angama-muscular, aphuhliswe kakuhle.
Umsila ufinyelela kwi-hock, efana nesimo se-saber. Xa inja ihlazile, umsila wehla, kodwa kufanelekile inja yejaji, njengoko umsila uphuma ngasentla, kodwa awuwa phezu kwayo.
Ubunzima obuboya beboya obude. Izinwele ezinde kakhulu zikhula entanyeni, zibuna, izihlathi. Kwi-croup uboya obunzima kakhulu. Emacaleni omqolo weenqatha inwele ezilukhuni kunye nexesha elide likhula, zenza "i-trousers". Kwi-muzzle, izitho zangaphambili, izihlathi, iinwele ezimfutshane zebunzi, zilungele umzimba.
Umbala wobuhlanga udla ngokuba ngumnyama okanye u-yellow-piebald, kwaye, ngokubanzi, umbala wobuhlanga uhlukahlukahluke. Kukho izinja ezinemibala enemibala emine nomgca omhlophe entloko kunye nomzekelo. Ikhola imhlophe kwaye ibanzi, ifinyelela emagxeni, ize idlulele kwisifuba kunye namalungu amhlophe. Iphunga lihlala limnyama. Umsila unomxholo omhlophe. Unokudibana nommeli walobuhlanga kunye nokuxhaphaka kwezimhlophe (75% okanye ngaphezulu) kunye nokushayiswa kombala omnyama phakathi kwamehlo. Ngamanye amaxesha uboya bunokuba ngumbala we-marble-piego, izinja zezimvu zolu hlobo kwiimarike zamanje zezoo zibiza kakhulu.
Uhlobo lwe-Sheltie lunembonakalo enhle, ukuzola, ukuthula, ubunjani obunqabileyo, ukuvumela ukuba umntwana abe nabantwana abancinci, yingakho wathandwa nguye. Izinja zalolu hlobo zizinikele kwaye zithandwa, zibuhlobo obuhle kakhulu kubantwana. Abalusi baseScotland babonakalisa iingqondo ezibukhali, iqondo eliphezulu lokuzinikezela. Abameli bobuhlanga banengqiqo, ingqwalasela yabo igxininise kwizinto ezinomdla kubo, yingakho baba zizinja zomalusi. EmaMpuma Ekude okwangoku, abameli balobu buhlanga basebenzisa njengabelusi bezondlo ezibonakalayo. Ezinye iindidi zeegusha azikwazi ukujamelana nesondlo ngenxa yokulumkisa kunye neentloni.
U-Sheltie uhlanga olukwazi ukunyamezela indawo yokuhlala, kodwa kwimeko yokuhamba rhoqo emoyeni omtsha. Umalusi waseScotland ekunyamekeleni nasekudleni akusikho nto. Nangona kunjalo, ukuhlamba rhoqo kunye nokudibanisa inja kuya kwenza ukuba izinwele zibe nzima.
Iintsana kunye nokusebenza
Ukuvuthwa kwezesondo kweenja zeegusha kufinyelelwe emva kweminyaka emibini, abafana bakhula emva kwexesha. Amancinci anconywa ukuba aqeqeshe ukususela ebusheni, njengoko baqonda yonke into kwi-fly kwaye bayakwazi ukuqeqeshwa kalula. Musa ukunyanzelisa okanye ukuphoqa intshontsho ukwenza imiyalelo, kwaye ngexesha loqeqesho awukwazi ukumemeza ngeenja.
Ngokuqeqeshwa kakuhle umalusi waseScotland angaba inja yokulinda, nangona kuya kuba ngaphantsi kwezinye iintlobo ezisemthethweni (izinja ezijoliswe kumsebenzi wokulinda).
Ubukhulu kunye nobukhulu
Ukukhula kwabaseScottish Shepherd avareji. Amadoda atshaba - 33-38 amasentimitha, amabhinqa - 30-35.5 amasentimitha. Ama-sheepdogs aseScotland aneenwele ezininzi zobuncwane ngenxa yezinto abonakala ngathi zinkulu. Isisindo sabameli bobuhlanga luhluka phakathi kwe-8-11 kg. Isisindo se-Sheltie sisoloko silingana nobukhulu bomzimba.
Yiyiphi enye into engcono - yokutya okomileyo okanye eyomileyo?
Imidlalo yokudlala indima yezesondo, imifanekiso
Izindlu ezihle, ifoto
U-Olga Buzova wasula iipumlo zakhe eTarasova: UJeremy Meeks wagibela inkwenkwezi ye "House-2" - ilona lihle
Indlela yokususa ama-freckles kunye namabala e-pigment ebusweni
I saladi ye quinoa
Iphayinaphu yepinapple ngamantongomane
Umtshato weVampire uVodonaya wayethusa abasebenzisi bewebhu
Iqabunga elimnandi, elimnandi nelinen elimhlophe
Iipaletti ezinemibala yeenwele Loreal, Estelle noGarnier
Iimpawu ezimnandi ngePasika 2016. Indlela yokuvuyisana ngePasika - i-SMS imfutshane. I-Easter - i-sms ehlekisayo-iyavuyisana
UBrynza kwioli kunye nemifuno